Inankii Jaarka - Codka Ubax
Posted by: Codka Ubax Posted on July 5, 2020
Waxa aannu soo dhex degnay xaafad dadkeedu aanay iska war hayn. Guri kasta deyr ayaa ku wareegsan, gudaha ayay nololi ka jirtaa, dhexdooda se la is ma yaqaanno. Mid ka mid ah in uu isagu ku dhex jiro maan ogeyn. Cidlada iyo mugdiga hadheeyey xaafadda, in uu nal ka dhex daaran yahay maan filayn. Waan se ogaan doonaa, isaga ayaa bannaanka u soo bixi doona.
Habeen, fiid ay shanqadhu go’day ayuu albaabka soo garaacay. Waan ku soo dhowaaday. Qof ay waayo badani na dhex mari doonaan ayaa dhanka kale ka taagan albaabka aan furi doono. Wax yar ka dibna waannu is eegaynaa. Waxaan xasuustaa in aan la yaabbanaa muuqaalkiisa. Ma midabkiisan aan kii Soomaalida u ekayn baa sababtu? Salaan ka dib ayuu i weydiiyey in ay hooyo joogto. “Haa walaal, way joogtaa” ayaan si kala maqan u idhi. Hooyo ayuu isu sheegay. In Muuse la yidhaa, jaarkayaga uu yahay, waalidkiisii ka maqan yahay, ilmo yari uu ka xanuunsanayo, in loo qaado uu u baahan yahay. Intii aanay hooyo “haye” odhanba waxa aan sii qorshaystay kursiga aan gaadhiga fadhiisan doono.
Waan ku farxi jirey in aan wax u qabto. Dhowr jeer oo kale ayaannu hawlo kala duwan ka caawinnay. Isbarasho ayaa na dhex martay maaddaama oo aan ahaa qofka mar kasta ay hooyo u dirto dhankooda. Safiirka reerka ee jaarka u qaabbilsan ayaan noqday. Shaqo aan ku raaxaysan jirey. Ixtiraamkiisa, hawlkarnimadiisa uu reerka ku dhaqayo iyo dabcan quruxdiisa ayaa i asqaysay. Sidaas oo kale in uu isna ahaa ayaan dareemayey. Waxba isu maannu sheegin, in la sheegana u may baahnayn. Hadalka ayaannu kala sugi jirnay. Inta aan dhammaysanayo ayuu dhowri jiray. Marka uu hadlo ayaan joogsan jirey. Qof aan sidaa u dareemo ayuu u horreeyey, maalmuhuna sannaddo ayay ku dambeeyeen.
Aroor aan guriga ka maqnaa ayaa farriin la iga soo daba diray. Reerkii wacnaa way guureen. Dhulka ayaa ii kala dheeraaday. Mawjad meel halkan ah taagnayd ayaa kalgacayl cusub igu dhirbaaxday. Waan is beddelay, wax se maan beddeli karayn. Sannadkii labaad ee jaamacadda ayaan ku jiraa. Wax noloshayda beddeli doona ayaa soo baxay. Wax Facebook la yidhaa. Marka aan guriga imaaddo ayaan istimaali jirey, moogganaan in uu Muuse igaga soo bixi doono maalin dhow. Waan furay. Indhaha ayaa si hummaag ah u arkay codsiga cusub. Faro qoraal ka soo daalay ayaan aayar ku gujiyey. Waan toosay. Waa Muuse oo i soo eegaya. Jannadii ifka qof helay ayaan noqday. Waannu is waraysannay. Isaga oo i hor taagan oo aan la hadlo ayuun baan ku nefisi lahaa. Qof aad tebtay qoraal kaga boqo ayaa ka mid ah ciqaabaha yaryar.
Xidhiidhkiisu baahi gaajo iyo harraad ka ba’an ayuu iga bi’iyey. Maan nuuxsan jirin marka aan la hadlayo. Maalin kasta, maalin oo dhan ayaannu sheekaysan jirnay, illaa uu madfac igu dhuftay. Waan sugayey runtii, haddana waan ka naxay. Naxdin badhkeed ay farxad tahay. In uu weligiiba i jeclaa ayuu ii sheegay. In uu boggu i gariiray ayaan xasuustaa. Albaab aan korka ka salaaxayey ayuu ii furay. In aan la mid ahay ayaan si niyad san ugu sheegay. In albaabka guriga mar kasta oo la garaaco aan isaga moodi jirey. In aan degdeg u furi jirey. Marka aannu iska soo hor baxno in aan hoosta ka khaawisi jirey. In aan ogaa in uu isagu kaygii ahaa, balse kaygu aanu ogeyn inuu isaga ahaa.
Badweyn kalgacayl ah ayaannu bilownay in aannu sacabbada ku dhurno. Dhowr sanno ayaa tegay, xidhiidh aan go’ayn ayaa yimid. Jaamacaddii ayaan dhammeeyey, laba gelin oo shaqo ah ayaan bilaabay. Isagu jaamacad ayuu ku jiraa, shaqana dhinac ayuu ka wadaa. Si kale haddii aan u dhigo, wakhtigii ayaa qaybsami waayey. Saacadihii dhaadheeraa ayaa soo gaabtay, xidhiidhkii joogtada ahaa ayaa soo yaraaday. Riyooyinkii aannu wada dhisi jirnay, gurigii naxariista ku dhisnaa ee aannu fiid walba taagi jirnay; raad tiix helay ayay noqdeen. Taasi isbeddel badan ayay dabeecaddayda ku keentay. Xanaaqayga ayaa dhowaaday, wax walbana si taban ayaan u eegi jirey. Dadka iga ag dhow ayaa i weydiiyey waxa iga qaldan, aniga ayuun baa og barta la iga raacay. In ay shaqadu igu badatay ayay u haystaan, in ay wax kale igu yaraadeen ma oga. In yar ka dib telefoonkii ayaa iga lumay, Facebook-na ma haleelo. Waa xadhigii u dambeeyey ee isku kaaya hayey, isna wuu go’ay.
Muuse wax intaa ka badan ayaa naga dhexeeya. Wuu i soo raadiyey. Si uu ku soo helay ma garanayo, telefoonkii xafiiska ayuu soo wacay. Goor aanan filayn ayaa la iigu yeedhay. Codkiisa markii aan maqlay ayaa la i daaray. Qof aan beri ahaan jirey ayaan noqday. Dardar cusub ayaan la soo baxay. Shaqadii ayaan markiiba natiijooyin waaweyn ka soo hooyey. Telefoon ayaan soo iibsaday. S4 ayaa dunida haystay. Skype ayaan soo dejistay. Beerka ayaan ka tumay. Shan sanno ayuu dalka ka maqnaa, magaalada ayaan kamaradda ugu qabtaa. Marka aan shaqaynayo ayuu ila joogaa. Marka aan weelka xalayo ayuu ila heesaa. Waannu is helnay, kaygii ayaa tiisii helay.
Jacayl dhulgariir ma waayo, mise xaasid bay ahayd? Xidhiidhkayagu waxa uu ahaa mid asxaab badani og tahay. Muddo lagu barto ayuu jirey. Anna kalsooni ayaan Muuse ku qabay. Dad sannaddo badan oo kalsooni ah haysta ayaannu ahayn. Waan u sheegi jirey asxaabtayda, in ay warmo dhabarka ku sitaan meeshaba maan soo dhigan. Inta aan guur iyo yagleelidda guri aannu leennahay aan kala hadlayo, qaar habaar qaba ayaa qorshahaa dumintiisa ku hawlanaa. Warbixinno uu sameeyey qof Ilaahay ka go’ay ayaa loo gudbiyey. Wax aan jirin ayaa looga sheekeeyey. Runtii i may dhibin taasi, waxa aan ka seexan waayey sida fudud ee uu u rumaystay. Wax kasta oo aan ku idhaahdo, ta dadka ayuu ka raacayey. Si aanan garanayn ayaan noqday. Wax aan naftayda ku qanciyo ayaan garan waayey. Sow adigii i jeclaa, waad i taqaannaa, sideed been la iga sheegayo u rumaysan kartaa? Dadka miyeynaan iska xigin? Waxa uu ii sheegay in aanu marka horeba igu qanacsanayn. Meel baa i go’day. Dhowr bilood ayaan qolof socota ahaa. Wax yar ka dib ayaan arkay hambalyada meherkiisa oo i dhaafdhaafaysa. Magiciisa ayaan arkay, meel baa i xanuuntay. Magacaygii ayaan agtiisa ka waayey, beerkaa i rogmaday. Gabadh nasiib leh ayuu magaceedu kiisa wehelinayey. Halkii maalintaa i go’day, weli way i maqan tahay. Si aan wadnahayga mar kale loo dhaawicin, waxa aan go’aansaday in aanan nin dambe siinin.
Posted in: Blog Stories Waa Layga Guursaday
Aan Kula Guursado
Huda Waan Ka Baqayaa